Translation contests | English to Somali | 59 | ProZ.com
Mox presents: "The comic life of a translator" » English to Somali
Maxaa Tiri (2)
Waxaan bilaabay dib u fiirin oo waxaan ogaaday inay ahayd wasaqda saxarada ugu badneyd uu soo saaray Hirka biyaha!
Si kastaba ha noqotee, waxaan geeyay turjumaad sax ah ... laakiin macmiilka shaqadayda heerka sare waxaa u tafaftiray nacas aan aqoon u laheyn kaas oo waxyeelay fasiraada!
Oo waxay ku daabaceen khadka tooska ah tarjumaadeyda oo hadeer-qaldan magaceygana wehliyo!
Entry #29386 — Discuss 0 — Variant: Not specifiednone
Waan bilaabay turxaan-bixinta waxaana garwaaqsaday inay ahayd mid khaladaad ka buuxaan oo lagu Hadaaqay!
Si kastaba, waxaan gudbiyay turjumaad qumman... balse macmiilka waxaa u tafatiray hawshaydii quruxneyd nacas aan aqoon laheyn kaasoo halleeyay!
Waxayna ku daabaceen onlaynka turjumadayda oo imminka cilladaysan oo uu bar-bar socdo magacayga!
Entry #28523 — Discuss 0 — Variant: Maxaa Tirimaxasom
Waxaan bilaabay inaan dib u eego waxaan gartay inay ahayd rakhiis aad u fara badan oo uu soo saaray Gurgle!
Si kastaba ha noqotee, waxaan keenay turjumaad wanaagsan laakiin shaqadayda cajiibka ah waxaa badallay qaar ka mid ah macaamiil jaahil ah oo aan aqoon lahayn aya burburay!
Oo waxay ku daabaceen khadka tarjumada ee cilladaysan hadda jirta oo ay weheliyaan magacayga
Entry #28534 — Discuss 0 — Variant: Maxaa Tirimaxasom
Waxaan bilaabay dib-u-fiirinta oo waxaan gartay inay ahayd rakhiis aad u fara badan oo uu soo saaray Gurgle!
Si kastaba ha noqotee, waxaan keenay turjumaad qumman ... laakiin macmiilaha shaqadayda cajiibka ah waxaa badallay qaar ka mid ah jahwareerka akhrin la'aanta ah ee burburay!
Oo waxay ku daabaceen khadka tarjumada ee cilladaysan ee hadda ku jirta oo ay weheliyaan magacayga!
Entry #28990 — Discuss 0 — Variant: Not specifiednone
Hussein Omar Ali
Waxaan bilaabay dib-u-fiirinta oo waxaan xaqiiqsaday inay ahayd rakhiis aad u fara badan oo uu soo saaray Gurgle!
Si kastaba ha noqotee, waxaan keenay turjumaad sax ah ... laakiin macmiilka shaqadayda cajiibka ah waxaa badallay qaar ka mid ah kuwa an waxba akhrin karin ee burburay!
waxayna ku daabaceen khadka tarjumada ee cilladaysan ee hadda jira iyada oo uu weheliyo magacayga
Entry #28879 — Discuss 0 — Variant: Not specifiednone
Abubakar Aden Hassan